Actas Trading Sdn.Bhd.| မလေးရှားအရက် / ဝိုင်တင်သွင်းသူ၊ ပေးသွင်းသူ
မစ်ရှင် | ရူပါရုံ
ACTAS TRADING SDN BHD သူငယ်ချင်းကောင်းအနည်းငယ်တည်ထောင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာငါတို့ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ဤအချက်ကအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနှင့်ဘုံအတွေးအခေါ်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဝိုင်ထုတ်လုပ်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းအတည်ပြုသည်. မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်ရလက္ကားရောင်းဝယ်သူများနှင့်ဟိုက်ပါမားကတ်များကိုအကောင့်အခြေခံဖြင့်သာရောင်းချသည်။. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ၀ ိုင် ၈၀ ကျော်နှင့်အဆင့်မြင့် ၀ ိုင်များနှင့်အတူ, ကျနော်တို့နေဆဲစဉ်ဆက်မပြတ်ပိုပြီးအသစ်သောစပျစ်ရည်ကိုထည့်သွင်းACTAS TRADING SDN BHD ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တန်ဖိုးမြှင့်အရက်နှင့်ဝိုင်များကိုကျယ်ပြန့်စွာထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်မလေးရှားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တည်ရှိပြီးအရေအတွက်သည်အပတ်တိုင်းတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် မလေးရှားနိုင်ငံ၏အရက်များနှင့်ဝိုင်ဖြန့်ဖြူးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပေးသွင်းသူများနှင့်ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုပါ။， lထို့နောက်အာရှနှင့်နိုင်ငံတကာမှအသိအမှတ်ပြုကြေညာသူတစ် ဦး ဖြစ်လာရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်.
ငါတို့ တာဝန် မလေးရှားရဲ့အကောင်းဆုံးပုလင်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း, အပြိုင်အဆိုင်နှင့်အသိပညာအရှိဆုံးထုတ်လုပ်သူနှင့်အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာသည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာ၊. ACTAS TRADING SDN BHD လိုင်စင်ရတဲ့ ဖောက်သည်အားလုံးကို ရရှိနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးဖို့ လုံးဝ ကတိပြုထားပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ စျေးပေါပြီး အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ဓာတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် ဝိုင်တွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့အားအထူးအရက်များနှင့်ဝိုင်များကိုသင့်တော်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ပေးရခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်သည့်အကူအညီများပေးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း. ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ရည်မှန်း ချက် သည် ကျွန်ုပ် တို့ ၏ ဖောက်သည် များ ကို အရက် နှင့် ဝိုင် ဖြင့် ထောက်ပံ့ ပေး ရန် သာမက ၊ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ဖောက်သည် များ ၏ ကော်ပိုရေးရှင်း အရောင်း ရည်မှန်းချက် များ အောင်မြင် ရန် ကူညီ ရန် ၊ သူ တို့ ၏ နောက်ထပ် ထုတ်ကုန် အချို့ ကို အမိန့်ပေး ရန် နှင့် ပြတင်းပေါက် အဆင်တန်ဆာ ပြသ ခြင်း တွင် သူ တို့ ကို ကူညီ ရန် တွဲဖက် တစ် ယောက် ဖြစ် လာ ရန် ဆန္ဒ ရှိ သည် ။.
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးအခေါ် ဆိုလိုတာက ကုမ္ပဏီရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးစီရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေအပေါ် အခြေခံရမယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပြီး အလုပ် သမားတိုင်းဟာ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ အရေးပါဆုံး အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။.
မူပိုင် © Actas Trading Sdn. Bhd.